Nezvedu - Ramangwana Valve Boka Co, Zvishoma.
Ramangwana Valve Boka mugadziri akasarudzika mukugadzirwa kwemhando dzakasiyana dzemavheji emaindasitiri, majoini erabha, uye zvigadzirwa.
Ramangwana Valve Boka raive richitsigira masisitimu epasirese epasi rose kweanopfuura makore makumi maviri adarika, ayo anosanganisira kugovera mvura yekunwa, kurapa kwemvura isina kuchena, kushomeka kwemvura yegungwa, kudiridza kwekurima, kugovera gasi rechisikigo, kugadzira magetsi, peturu uye indasitiri yemakemikari, mainjiniya uye kuvaka. , nezvimwewo Chinangwa chedu ndechekupa mhinduro dzinodhura kwazvo uye nekugadzira kukosha kwakawanda kune vatengi vedu izvo zvinobatsira kugadzirisa dambudziko rekurasikirwa nemvura uye zviite nyore nekutonga kwemvura.
Parizvino, Remangwana Valve Boka zvigadzirwa zviri mukutengesa kwakanaka munyika zhinji nenzvimbo dzakaita seEurope, Southeast Asia, America uye Middle East, nezvimwe. Huru zvigadzirwa seinotevera:
Gedhi Valve: DN40 ~ DN1000
Tarisa Valve: DN40 ~ DN600
Bhora Valve: DN15 ~ DN600
Tsoka Valve: DN50 ~ DN600
Mhepo Inosunungura Valve: DN50 ~ DN600
Y Sefa: DN15 ~ DN800
Rubha Joint: DN15 ~ DN3000
Tinogona kupa zvakasiyana zvinhu zvakaita simbi yekukanda, ductile simbi, simbi yakakoswa, simbi isina simbi, chiwanikwa simbi, ndokugadzira simbi uye nezvimwewo, zvinoenderana akasiyana mamiriro ekushanda. Izvo zvigadzirwa, kunze kwekutora China GB standard, kazhinji inotora yepamusoro indasitiri yenyika zviyero senge ANSI, AWWA, MSS, JIS, DIN, BS, nezvimwe kugadzira, kugadzira uye kuyedza.
Ramangwana Valve Boka rakasimbiswa pa1998, yedu yekugadzira, yekutengesa uye yedhipatimendi reQC rakakura kubva kuboka diki kuenda kune vanhu vanopfuura mazana maviri, uye nzvimbo yemuti ikozvino inovhara zviuru mazana mashanu emamirimita. Isu tave bhizinesi pasi pechikurumidza kukudziridza izvo zvine hukama zvakanyanya nekambani yedu tsika: Hunhu Kutanga, uye Gadzira Kukosha Kwazvo.
Uye izvo zvinotivimbisa kuti tinopa vatengi vedu rutsigiro rwakasimba rwezvigadzirwa zvepamusoro, basa rinoshanda zvakanyanya pamwe nezvakanaka zvehupfumi.
Stainless simbi Ball Valve, Trunnion Bhora Valve, Sluice Gate Valve, Angle Globe Valve, Gedhi reMvura Valve, Stainless Simbi Gate Valve,